Zụlite Ebumnuche Tupu Ngwa Ngwa Mobile | Martech Zone
Zụlite Ebumnuche Tupu Ngwa Ngwa
Monday, August 8, 2011 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Ndị ezi mmadụ na Webtrends (onye ahịa) ewepụtala akwụkwọ akụkọ na-enweghị atụ site na Director nke Mobile Analytics, Eric Rickson. Zụlite Strategy maka Mobile Maturity na Investment na-ejegharị site na isi ihe ngosi arụmọrụ na atụmatụ mkpanaka. Beyond isiokwu nke mobile nchịkọta, otu isi paragraf m hụrụ bụ:
Ugboro ugboro, ndị na-ere ahịa na-ama ọkwa dị oke mkpa nke ịkọwapụta na ịhazi atụmatụ ahịa mkpanaka, na-aga n'ihu na mmepe ngwa kama. Ọtụtụ na-eji ngwa iPhone abanye na mkpanaka mkpanaka, gafee mkpịsị aka ha, ma nwee olile anya na ọ ga-enweta ihe dị mma. Ndị ọzọ na-agbagharị ngwa ngwa mkpanaka gafee nyiwe niile bụ isi ma nwee olile anya na mmadụ ga-enweta ya. Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ na-ebipụta ngwa ma jiri akụ ha jigide ya. Ndị ọzọ na-ahọrọ ilekwasị anya na weebụ mkpanaka n'ihi na ha kwenyere na ngwa ga-aga n'ụzọ nke dinosaur.
Anyi edeela otutu ihe Mobile Marketing ebe a na Martech. Dị ka onye na-ajụ ase, ọ bụ otu n'ime ọsọ na-eto ngwa ngwa mana a na-achụghị ya. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ndị na-awakpo mkpanaka na-enweta uru ya. EBay na-ere ahịa nweta ihe karịrị ijeri $ 2.5 na ahịa site na mkpanaka na 2010 ma na-atụ anya ịba ego ahụ na 2011.
Jide n'aka na ibudata akwụkwọ akụkọ a maka nduzi miri emi na usoro ndị ahịa nwere ike iji nyochaa na melite usoro mkpanaka ha. N'ime ihe karịrị 450,000 ngwa ọdịnala, ọ dị mfe ịlafu na ngwakọta. Mepụta usoro mkpanaka - mgbe ahụ ịwakpo ikpo okwu bụ ndụmọdụ ka mma karịa ịtụfu ọtụtụ ego iji mepee ngwa nke ọ nweghị onye chọrọ, mkpa, ma ọ bụ na-adịghị enye uru maka akara ala gị.
Tags: mobile ngwamobile ngwa ọdịnala
Infographics: Ime QR Koodu nyocha
Aug 12, 2011 na 11:31 PM
Daalụ, Douglas maka ọnụ banyere akwụkwọ Eric Rickson… ihe na-atọ ụtọ. Dịka onye nrụpụta ekwentị, enwere m obi anụrị maka amụma Stanley Research banyere ndị na-ahụ maka ịntanetị na-arụ ọrụ karịa ndị ọrụ desktọọpụ site na 2014.
Na-eche ọtụtụ ngwa ga-adị site na mgbe ahụ?
Oh, na ọnụego gị nke ngwa 450,000 bụ maka'slọ Ahịa Apple - enwere ọtụtụ ndị ọzọ (n'oge na - adịghị anya karịa Apple!) Na Googlelọ ahịa Google, ụlọ ahịa Amazon, gbakwunyere ndị nke RIM, Microsoft, wdg.
Aug 16, 2011 na 10:28 PM
Na-na na na na na nri re: ngwa mkpa! Daalụ!